Kube ngamagama enkehli iMeya ifeza isethembiso – Sivubela intuthuko Newspaper
IMEYA yoMkhandlu weLembe, uKhansela Sduduzo Gumede ngesikhathi benikezela ngezidingongqangi kumalunga omphakathi.
UMASIPALA weLembe unikezele ngezidingongqangi ezimqoka kakhulu kumalunga omphakathi waseNdleleni, kuWard 1 no-25 KwaDukuza oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal. Lo Mkhandlu oholwa nguKhansela Sduduzo Gumede unikezele ngezimumathi manzi ezimbili wangagcina lapho waphinda wagixabeza umphakathi ngesiphehli sikagesi.
UKhansela Gumede uchaze amanzi njengesidingo esimqoka kunazo zonke nokumele kuqinisekiswe ukuthi sifinyelela ngokukhulu ukushesha kumalunga omphakathi waseLembeni.
Lezi zimumathi manzi uthe zizoklama indima enkulu kulezi ndawo ezilandelayo. YikwaSakhamkhanya,eSadloko, eSokosimbone, eMdlebeni kanye naseKamu. Usuwonke lo msebenzi iMeya ithe udle izigidi ezingu-24 zamaRandi.
Uthe ingu-2000 imizi engaphansi kweLembe esizokwazi manje ukuthola amanzi kalula ngaphandle kokuhamba ibanga elide kakhulu. Lokhu uthe nabo njengoMkhandlu kubethule umthwalo omkhulu obusemahlombe abo wokuqinisekisa impilonhle kumalunga omphakathi weLembe namaphethelo.
Echaza uthe: “NjengoMkhandlu okumqoka kakhulu kithina ukwenza isiqiniseko esikhulu sokuthi abantu bayawathola amanzi. Ikakhulukazi kulesi sikhathi sobhubhane lweCorona amanzi ayisidingo esimqoka.”
Eqhuba uMeya uGumede uthe njengoba kubhoke kakhulu ukhuvethe lweCorona kumqoka kakhulu ukuba abahlali abangaphansi kweLembe bathole amanzi ngendlela efanele. Uthe: “Njengoba kubhoke isifo iCorona. Kugqugquzelwa kakhulu inhlanzeko. Ngakho amanzi bekumqoka kakhulu ukuba njengoMasipala siqinisekise ukuthi abantu bayawathola kumnyama kubovu.”
Mayelana neziphehli zikagesi uthe ugesi nawo uyisidingo esimqoka kakhulu emphakathini. Uthe imizamo yabo yokufinyelelisa ugesi ezindaweni eziningi ezingaphansi kweLembe ibonakala ithela izithelo.
Uveze ukuthi banohlelo olujulile oluzoqinisekisa ukuthi bonke abantu beLembe bayawuthola ugesi. Uthembise ukuthi nakanjani basazoqhubeka balwele ukunikezela umphakathi ngazo zonke izinsiza eziwumgogodla wokuphila.
Echaza uthe: “Ugesi siyakuqonda ukuthi uyisidingo esimqoka kakhulu. Yingakho nje sithe noma sibanikeza amanzi abantu kodwa mawahambisane nogesi ngoba nawo uyisidingo esikhulu sabantu beLembe.”
ITHALA LESEKA OSOMABHIZINISI BESIFAZANE